सडकपेटीमा व्यापार व्यवसाय गर्न पनि पान अनिवार्य
सिन्धुली (अस) । कमलामाई नगरपालिकाले नगरक्षेत्रका सडकपेटीमा व्यापार व्यवसाय गर्न समेत पान वा भ्याटमध्ये एउटामा दर्ता हुनुपर्ने नियम लागू गरेको छ । नगरपालिकाले सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि यो नीति लागू गरेको हो । बजारको सडकपेटीमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू बढेकाले बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउनुपरेको नगरपाल...
गत आवमा कर्णालीमा ५ हजार साना उद्योग थप
भदौ ५, सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ मा कर्णाली प्रदेशमा ५ हजार ७८८ साना उद्योग थपिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष नयाँ उद्योगका रुपमा घरेलु तथा साना, लघु र वाणिज्य प्रकृतिका उद्योग दर्ता भएका हुन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर र...
नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारीको तथ्यांक कम्प्युटरमा
भदौ ५ , विराटनगर । विराटनगर भन्सार कार्यालयले नेपाल आउने भारतीय गाडीको तथ्यांक कम्प्युटरमा राख्न शुरु गरेको छ । भन्सार ऐन अनुसार सिमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सवारीको तथ्यांक अभिलेखीकरण गर्न लागिएको हो । यसअघि भन्सार सुविधाको सवारी र भन्सार तिर्ने सवारीको तथ्यांक हात...
मुस्ताङको चराङमा १ करोड १४ लाखको लागतमा सिंचाई सुविधा
भदौ ५, कास्की । मुस्ताङ जिल्लाको चराङबासीमा रू. १ करोड १४ लाखको लागतमा सिंचाई आयोेजना सम्पन्न भएको छ । मुस्ताङको लो -घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका १ चराङमा ‘मेकी युरा सिंचाइ आयोजना’ निर्माण सम्पन्न भएको हो । यस आयोजना सम्पन्न भएपछि सिंचाई अभावमा कृषि उत्पादनबाट बञ्चित हुँदै आए...
भन्सार अधिकृतसहित १५ जना विरुद्ध राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दा दायर
भदौ ५, नेपालगञ्ज । राजस्व अनुसन्धान विभागले बाँकेको नेपालगञ्ज भञ्सार कार्यालयका अधिकृतसहित १५ जना विरुद्ध राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपलचन मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालिन कर्मचारीहरु संलग्न हिमालय कार्गो तथा बनबोरी माता ट्रेडर्सका मुख्य कारोबारी बिनोदकुमार गुप्...
भदौ ५, दाङ । दाङ जिल्लामा दैनिक २० देखि २५ हजार लिटर दूध खपत हुने गरेको छ । जिल्लाका घोराही, लमही, तुलसीपुर, गढवा, भालुवाङ, नारायणपुर लगायतका ठूलो बजारहरुमा गरी दैनिक २० देखि २५ हजार लिटर दूध खपत हुने पाइएको छ तर यो माग भन्दा कम रहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । अन्य समयमा केही पुगे जस्तो देखिए पनि चा...
मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सुचारु
पर्वत । मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा रोकिएको काम पुनः सुचारु भएको छ । असार पहिलो सातादेखि रोकिएको काम मंगलवारदेखि पुनः शुरू भएको लोकमार्ग आयोजना कार्यालय, पर्वतले जानकारी दिएको छ । जिल्लाको पूर्ववेतनीबाट १०५ जना कामदारले काम थालेको लोकमार्ग आयोजना कार्यालय, पर्वतका प्रमुख आशिष थापामगरले बताए...
ग्वारखोलामा १८ किमी तटबन्ध
घोराही । दाङको ग्वारखोलाको दायाँबायाँ क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध गरिने भएको छ । खोलाले दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन बगाउन थालेपछि तटबन्धको योजना अघि सारिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख गणेश मरासिनीले बताए । उनका अनुसार खोलाको १८ किलोमिटर क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध गरिनेछ । तटबन्धक...
घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट १४ करोड संकलन
रौतहट (अस) । मालपोत कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुरले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट रू. १४ करोड ५१ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले चन्द्रपुर, गुजरा, फतुवा विजयपुर, कटहरिया तथा वृन्दावन नगरपालिकाका सेवाग्राहीको घरजग्गा रजिस्ट्रेशन गरेबापत उक्त राजस्व संकलन गरेको हो । संकलित राजस्वको...
चितवनमा साउन महीनामा ९ हजारले प्यान लिए
चितवन (अस) । चितवनमा गत साउनमा ९ हजार जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् । सरकारले तलब तथा पारिश्रमिक लिनेहरूका लागि प्यान अनिवार्य गरेसँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरबाट प्यान लिनेहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । गत साउनमा ८ हजार ९ सय ११ जनाले प्यान लिएको कार्यालयका सूचना अधि...